Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaza iRf Cavitation Cryolipolysis Ngezibambo ezi-3 zeBD06
Iiseli ezinamanqatha ngokwendalo zisengozini yokuphola kunesikhumba kunye nezinye izicwili ezijikelezileyo. Iiseli ezinamafutha zinokupheliswa ngokukhuselekileyo ngaphandle kokonakalisa ulusu.
I-2 Handle Shock Wave Cryolipolysis Firming Tissue 2 in 1 Cool Fat Freezing CRS08
Ithiyori yokuSebenza yeCryolipolysis: I-Triglyceride emafutheni iya kuguqulwa ibe yomelele kumaqondo obushushu athile aphantsi.
I-RF Pluse Umshini wokuKhanya kwe-LED yokuKhanya kobuso ebusweni Ukususa i-Multipolar Body Slimming MLS09
Unyango lweRadio Frequency Vacuum luyilelwe ukususa amafutha emzimbeni ngendlela ekujoliswe kuyo kakhulu.
40K Amandla esandi esomeleleyo sokuqhushumba intloko ngokufanelekileyo ikhuthaza umbutho we-metabolism, ukutyeba amafutha e-orenji, ukuqinisa ulusu, ukomeleza ukuthamba kolusu, njl.
Umzimba ophathekayo Ukuncipha 6 Ngo-1 kwi-Monopolar RF Vacuum 40K Cavitation Fat Loss V809
Inkqubo yokutsala inkunkuma ephuhliswe ngokomgaqo wokutsala, ukutsala irong kunokwenza ukuba ii pores zivuleke ngokupheleleyo,
I-Hiemt EMS ye-Muscle Stimulator Machine EMS yokuKrola uMzimba oQinisekayo we-CLS05 Max
Isiphatho se-4 sokuphatha i-HI-EMT slim somatshini wokusebenzisa ubuhle sigxile kumhlaba we-electromagnetic ngamandla akhuselekileyo okudlula emzimbeni kunye nokunxibelelana nee-motor neurons.
Ikhaya Sebenzisa i-IPL yeQuantum yokuSusa iRadio ukuRhoqo kweFowuni kwisixhobo esiQinisa iN2
Ukusetyenziswa kweKhaya isixhobo se-laser se-IPL kuqoqosho kwaye kuyasebenza. Ukhuseleko kunye nokukhawuleza .1-3times ezikhawulezayo iiseshoni ezinemizuzu eli-10 zinokunciphisa ukukhula komzimba kweenwele zomzimba kunye nobuso Ukulwa ukuguga.
Ukufika okutsha kwe-IPL isixhobo sobuhle be-laser isixhobo 3 KWI-1 Silky Skin Ukususa i-lmprove izixhobo ze-Acne MT02
I-IPL epilator ayinakususa kuphela iinwele ngokufanelekileyo, inokukhuthaza ukuvuselelwa kweseli, ukubuyisela ukutyeba kolusu kunye nokuhlaziya ulusu. Itekhnoloji ye-IPL,
I-999999 Ikhanyisa Ukusetyenziswa kweKhaya i-IPL Ice Cool Remover Icebo leMT01
I-IPL epilator ayinakususa kuphela iinwele ngokufanelekileyo, inokukhuthaza ukuvuselelwa kweseli, ukubuyisela ukutyeba kolusu kunye nokuhlaziya ulusu. Itekhnoloji ye-IPL, ukukhanya kwe-pulse kungena kwiifollic zeenwele ukunqanda ukubuyela kweenwele,
Iikhatriji eziguqukayo ze-IPL Series Sebenzisa isiXhobo seKhaya sokuSusa iiNwele nge-Easy Operation MN03
iyakufezekisa injongo yokulahla amachaphaza amnyama, ukunyanga i-telangiectasis, ukususa iinwele kunye nokuvuselela ulusu. Ngenxa yokuba ulusu oluqhelekileyo lufunxa amandla amancinci, ke unyango lukhuselekile.
123456 Okulandelayo> >> Iphepha 1/30